Izinto ezinhlanu okufanele uzenze nsuku zonke ukuze ube nempilo | Bezzia
USusana Garcia | 06/04/2021 20:00 | Amathiphu ezempilo, Ezempilo
Ukuba nempilo kwesinye isikhathi kuyindaba yenhlanhla, ngoba izakhi zofuzo zinokuthintana kakhulu nakho, kepha futhi ihlobene nendlela esiphila ngayo nakho konke esikwenzayo. Isenzo ngasinye nomkhuba ngamunye kunomthelela emizimbeni yethu futhi kugcina kusithinta, esikhathini esifushane noma eside, ngakho-ke kufanele sikhumbule ukuthi kufanele senze ezinye izinto ukuze sibe nempilo futhi siphile impilo enempilo esivumela ukuthi sifinyelele ebudaleni indlela yokuphila enhle.
Sizobona Izinto ezinhlanu okufanele uzenze nsuku zonke ukuze ube nempilo ngokuhamba kwesikhathi. Lo wumjaho webanga elide futhi ukushukuma komzimba okuhle ukuthi kusukela osukwini olulodwa kuye kolandelayo kukwenza uzizwe ungcono akusizi ngalutho. Kufanele nakanjani wenze izinto ukuze ube nempilo enempilo. Lezi zinhlobo zezinto ziyingxenye yendlela yakho yokuphila futhi ziyizenzo zansuku zonke ezikuvumela ukuthi uzinakekele.
1 Ukuphumula okuphumuzayo
2 Ukudla okulinganiselayo
3 Yenza imidlalo nsuku zonke
4 Phuza amanzi
5 Gwema ukucindezeleka
Ukululama usuku nosuku futhi ube nempilo enempilo, kudingekile impela ukuphumula ukuze umzimba nengqondo zilulame. Lokhu kufakazelwe ukuthi uma singalali kahle sikhathele ngokwengeziwe, unqamule futhi unengcindezi. Ngakho-ke akugcini ngokulala amahora athile kuphela, kodwa okunye okusezingeni. Zama ukuthi yonke into esegumbini ikulungele ukuphumula. Gwema izikrini futhi ungafaki ithelevishini, ngoba lokhu kudala ukuthi ungalali kahle. Tshala imali kumatilasi omuhle okusiza ukuphumula futhi ubheke ukushisa kwegumbi. Ungazisiza ngezinto ezifana nephunga elizolisayo noma imisindo esiza ukuphumula. Ukulungisa isikhala kubalulekile, yize kufanele futhi ugweme amadina amakhulu nokuzivocavoca ngesikhathi sokulala, ngoba kuzokuvula. Uma ngakho konke lokhu ungakwazi ukulala kahle, kungadingeka ukuxhumana nodokotela.
Sonke siyazi ukuthi yini ukudla okunomsoco. Kufanele uthathe izithelo nemifino nsuku zonke, ngaphezu kokugwema ukudla okusetshenzwe, ngoba kuyingozi kakhulu. Uma ufuna okweqile, kufanele kube ngesikhathi hhayi kuphela nsuku zonke. Osukwini nosuku kufanele udle ukudla okulula nokuhlukahlukene okugwema usawoti omningi, amafutha noma ushukela. Uma ufunda ukujabulela ukudla okungokwemvelo okuningi, ngokuhamba kwesikhathi ngeke usadinga ukudla ukudla okunoshukela omningi noma amafutha futhi uzobona ukuthi uzizwa ungcono kanjani. Ukudla okufanele kusisiza ukuba sibe nokuhamba okuhle kwamathumbu, inhlalakahle nokugayeka okuhle.
Yenza imidlalo nsuku zonke
Mhlawumbe ungazizwa uthanda ukwenza umdlalo onzulu nsuku zonke, kepha ungakwazi ukuzivocavoca nokunyakaza nsuku zonke. Kubalulekile ukuthi uvivinye umzimba noma ngabe ukuhamba ngejubane elihle, wenze ezinye izivivinyo ukuze welule noma ube namandla. Okubalulekile ukungahlali usuku lonke noma ungenzi lutho, ngoba ngisho nokuthinta okuncane kubala ekugcineni futhi kusisize sibe nempilo. Zama ukuthola okuthandayo, yenza imidlalo ehlukahlukene futhi uyijabulele.
Yize kuliqiniso ukuthi sonke siyazithanda iziphuzo ezinoshukela noma lezo eziqukethe utshwala, iqiniso ukuthi into enempilo kakhulu esingayiphuza ngamanzi. Ukuphuza amanzi nsuku zonke kubaluleke kakhulu ngoba umzimba wethu uyakudinga. Ungenza ama-infusions ngaphandle kokungeza ushukela, njengoba nawo enempilo, noma engeza i-lemon wedge emanzini. Konke lokhu kukusiza ukuthi uphuze kakhulu futhi unikeze ukunambitheka.
Emphakathini wanamuhla lokhu kunzima kakhulu, kepha kuyadingeka ukwehlisa amazinga engcindezi engakhiqizi esinayo noma singagula nokugula. I- ukucindezeleka kuwumthombo wezinkinga ngakho-ke kufanele sifunde ukuyilawula.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Izinto ezi-5 okufanele uzenze nsuku zonke ukuze ube nempilo